HomeAfricaSacuudi Carabiya iyo dalalka kale ee u soo baxay Koobka Adduunka
Ciyaaraha isreebreebka ah ee loogu soo baxayo koobka Adduunka ayaa socda, shan dal ayaana u soo baxay oo ku biiray Ruushka oo isagu martigalinaya tartanka xagaaga soo socda.
Brazil oo shan jeer koobka Adduunka soo qaaday ayaa isa soo xaadirisay haddana, waxaana ku weheliya xulka Belgium ee uu layliyo Roberto Martinez, Iiraan oo la loodin la’yahay, Mexico iyo Japan.
Haddaba siday halkaas ku gaareendalalkaasi? Waa kuwee laacibiintoodu? Maxaanse ka naqaanaa tababareyaasha qaabeeyay guushan ay ku naaloonayaan?
www.cadalool.com ayaa arrintaas u kuurgalaysa
Stanislav Cherchesov kooxda uu hogaamiyo ayaa ku guuldaraysatay in ay ka soo gudubto wareeggii koobaad ee koobka Confederations Cup, waxaana ka badiyay xulalka Mexico iyo Boortaqiiska, waxayse ciyaartii koobaad ka badiyeen New Zealand, ciyaaraha ay gurigooda ku ciyaari doonaanna si dhaw ayaa loola socon doonaa, dalka Koonfur Afrika oo kali ah ayaana noqday wadankii aan ka soo gudbin wareegga koobaad.
Xulka Cherchesov ayaa noqon doona midkii shanaad ee Ruushka uga qayb gala Koobka Adduunka.
Markii u horraysay waxay koobkan kaga qayb galeen Maraykanka sannadkii 1994, inkastoo midawgii Soviet uu kaalinta afraad galay sannadkii 1966dii.
Ciyaaryahan muhiim ah: Igor Akinfeev oo ah gool yahe caan ah, wuxuu dalkiisa u saftay 100 jeer, khibraddiisuna muhiim ayay u tahay. 31 jirkan oo xirfaddiisa oo dhan ku qaatay naadiga CSKA Moscow, ayay u badan tahay in uu kabtan u noqdo dalkiisa martida loo yahay.
Ma jiro qof horyaalka Ingiriiska ka ciyaara oo ka tirsan xulkan.
Yaa layliya? Cherchesov ayaa isku duba riday xulkii koobkii Confederations Cup-ka ka dib wuxuuna sheegay in kooxdiisu ay bislaan doonto khibradda ay leeyihiin awgeed. Wuxuu horay gool haye ugu soo noqday midawgii Soviet iyo Ruushka, xagaaga soo socdana waxaa looga fadhiyaa inuu tiigsado ilaa afar dhammaadka.
Belgium ayaa noqoday xulkii u horreeyay ee Yurub ka socda ee Ruushka ku biira, waxayna ka soo dhex duseen kooxo aan sahlanayn
Taageereyaasha Horyaalka Ingiriiska waxay durba si dhib yar u aqoonsan doonaan ciyaaryahanno reer Belgium ah oo ay ka mid yihiin Dembele, Marouane Fellaini, Christian Benteke, Romelu Lukaku, Kevin de Bruyne iyo Eden Hazard.
Shaqsiyaad miisaan leh oo ay ku tiirsanaan karaan, xirfadooda ayuu xulku haystaa si ay masraxa caalamka uga soo muuqdaan sannadka 2018ka.
Ciyaaryahan muhiim ah: Eden Hazard ayaa ah ciyaaryahan afka hore uga ciyaara Chelsea, wuxuuna si dhibyar u kala daadiyaa difaaca isaga oo adeegsada xawaarihiisa uu kolba si dhakhso ah dhan ugu wareejiyo kubadda. Baasaska ayuuna si fiican u qaataa.
Ciyaar toyda Horyaalka Ingiriiska ka ciyaara: Michy Batshuayi, Thibaut Courtois, Eden Hazard (dhammaantood Chelsea ayay ka tirsan yihiin), Simon Mignolet (Liverpool), Toby Alderweireld, Moussa Dembele, Jan Vertonghen, (dhammaantood waxay u ciyaaraan kooxda Tottenham), Kevin de Bruyne, Vincent Kompany (labadaasna Manchester City), Marouane Fellaini, Romelu Lukaku (labadooduba Manchester United), Steven Defour (Burnley), Nacer Chadli (West Brom), Kevin Mirallas (Everton), Christian Benteke (Crystal Palace), Divock Origi (Wolfsburg, dayn ahaan ula joogaa balse Liverpool ayuu ka tirsan yahay), Christian Kabasele (Watford).
Waa kuma tababarahoodu? Roberto Martinez guushii ugu waynayd ee uu ciyaaraha Ingiriiska ka gaadho waxay ahayd in uu Wigan la qaaday koobka FA sannadkii 2013kii.
Wuxuu horay u soo tababaray Swansea iyo Everton, waligeedna su’aal lama galinin awooddiisa weerarka, balse waxaa walaac laga muujiyay habkiisa difaaca markii uu naadiyada tababarayay.
Laakiin waxay u muuqataa in arrintaas aanay dhib ku haynin hadda maadaama oo uu haysto ciyaaryahannada difaaca uga ciyaara Tottenham ee kala ah Jan Vertonghen iyo Toby Alderweireld iyo kabtanka kooxda Manchester City, Vincent Kompany.
Brazil ayaa ahayd dalkii koobaad ee u soo baxa Koobka Adduunka bishii March.
Badanaa waxaa lagu daraa xulalka ay macquulka tahay in ay hantaan koobka, shan jeer oo hore ayayna soo qaadeen.
Waxaa ka mid ah ciyaaryahanka ugu qaalisan adduunka.
Brazil waxay koobkan Adduunka soo qaaday 1958, 1962, 1970, 1994 iyo 2002, markii u dambaysaysey Jarmalka ayaa 7-1 kaga badiyay oo koobka ka reebay.
Ciyaaryahan muhiim ah: Neymar oo afka hore ka ciyaara ayaa ku fadhiya 200 milyan oo gini wuxuuna hadda u ciyaaraa Paris St-Germain, ciyaaryahanka caanka ah ee Pele ayaa taageeray in uu istaahilo abaalmarinta Ballon d’Or.
Ciyaaryahannada ka Ciyaara Horyaalka Ingiriiska: Ederson, Fernandinho, Gabriel Jesus (dhamaantood waxay u ciyaaraan Manchester City), Philippe Coutinho, Roberto Firmino (labadooduba waxay la joogaan Liverpool), Willian (Chelsea).
Yaa tababara? Tite ayaa baddalay ciyaaryahankii khadka dhexe uga ciyaari jiray Barazil ee Dunga, tan iyo intii uu xilkan la wareegay 56 jirkanna, 11 dhibcood ayuu u soo hooyay saddex dhibcood ayuuna ka koreeya Colombia iyadoo ay saddex ciyaarood dhiman yihiin.
Waqooyiga, Badhtamaha Ameerika iyo Caribbean-ka
Mexico ayaa xaqiijiyay in ay Ruushka iska xaadirinayaan ka dib markii ay 1 iyo 0 kaga adkaadeen Panama iyadoo aan wali laga badinin.
Kooxdan uu hogaaminayo Juan Carlos Osorio ayaa guulo ka soo hoysay Waqooyiga, badhtamaha Ameerika iyo Kaariibiyaanka, weerarka ayuuna xoogga saaray.
Walaac ayaa ka jiri kara dhanka difaaca, maadaama oo ay hubaanti la’aan ka jirto helitaanka Rafael Marquez oo difaaca uga ciyaara oo Maraykanku uu ku eedeeyay in uu xidhiidh la leeyahay koox daroogo ka ganacsata.
Mexico ayaa wareegga isreebreebka ka gaadhay lixdii Koob ee Adduunka ee u dambeeyay, siddeed dhammaadka ayayna ka gaadheen sannadkii 1986-dii markaas oo ay iyagu martigaliyeen.
Ciyaaryahan muhiim ah: Hirving Lozano ayaa saddex gool u dhaliyay saddex ciyaarood, tan iyo markii uu ka wareegay Pachuca isaga oo ku biiray PSV Eindhoven. 22 jirkan ayaa sidoo kale xidig ka noqonaya ciyaaraha qaranka isaga oo goolkii guusha ee Panama u saxeexay.
Ciyaaryahanka waxaa sidoo kale u bogay laacibka reer Argentina ee Diego Maradona markii uu ku soo biiray Eredivisie isaga oo gool dhaliyay, taageerayaashii garoonka Philips Stadion ayaana u istaagay iyaga oo u sacabatumaya.
Ciyaaryahannada Horyaalka Ingiriiska ka joooga: Javier Hernandez (West Ham).
Yaa layliya? Tababare ku xigeenkii hore ee Manchester City Juan Carlos Osorio ayaa hadda tababare u ah, balse wuxuu seegay ciyaarihii ka tirsanaa koobka Gold Cup ee ay xagaagan ciyaartay kooxdiisu, ka dib markii ay Fifa ganaaxday lix ciyaarood isaga oo lagu eedeeyay in uu aflagaadeeyay garsooreyaal si aan habboonayna ula dhaqmay.
Ninkan reer Colombia oo ka qalinjabiyay jaamacadda Liverpool John Moores University, isaga oo ka soo bartay diblooma sayniska iyo kubadda ah, waxaa taageeray ciyaartoy khibrad leh oo xulkiisa ka tirsan ka dib markii uu dhaleecayn kala kulmay taageereyaasha.
Iiraan: Waxaa laga yaabaa in ay Ruushka tagto iyadoo dhoolacadaynaysa, laakiin waxaa laga yaabaa in ay xulal kale ka cadhaysiiso inta isreebreebka lagu gudajiro.
Xulka Carlos Queiroz ayaan wax gool ah laga dhalinin 12 kulan oo isku xiga, arrintaas ayaana ka dhigan 18 saac oon gool laga dhalinin, waxayna arrintaasi ka soo billaabatay kulankii ay 6-0 kaga soo badiyeen Guam wareeggii labaad ee isreebreebka Aasiya oo la qabtay bishii Nofembar ee sannadkii 2015kii.
Iiraan waa xul aad u diyaarsan oo ay caddahay in aan difaacooda la mari karin, markii labaad oo is xigta ayayna Koobka Adduunka ka qaybgalayaan iyaga oo uu tababarayo Queiroz oo horay tababare ku xigeen uga soo noqday Manchester United.
Waa markii shanaad ee Iiraan ay u soo baxdo Koobka Adduunka, laakiin marka kali ah ee ay guul ka gaadheen ciyaaraha koobkaas waxay ahayd middii ay 2-0ta kaga badiyeen Maraykanka ee ka tirsanayd Koobkii Adduunka ee lagu qabtay Faransiiska sannadkii 1998dii.
Ciyaaryahan muhiim ah: Difaaca Iiraan ee aan la loodin karin waxaa ka mid ah Ramin Rezaeian oo ka ciyaara difaaca midig wuxuuna awood u leeyahay in uu weerar qaadi karo maadaama oo uu orad dheer yahay.
Ciyaartoygan 27 jirka ah wuxuu ka ciyaaraa kooxda Oostende ee ka tirsan Horyaalka Belgium.
Ma jiro ciyaartoy Horyaalka Ingiriiska ka ciyaara oo reer Iiraan ah
Waa kuma tababarahoodu?
Carlos Queiroz waa nin taariikh ku leh kubadda wuxuuna soo layliyay Sporting Lisbon, Koonfur Afrika, Real Madrid, tababare ku xigeenna wuxuu ka soo noqday Manchester United markii uu kooxdaas laylinayay Alex Ferguson.
Tan iyo sannadkii 1998dii markasta waxay u soo baxayeen Koobka Adduunka, Japan wuxuu mar ahaa dalka u sareeya Aasiya, balse wuxuu jab ka soo gaadhay Brazil sannadkii 2014kii, sannadkii xigay ee 2015kii waxaa laga qaaday Koobka Aasiya ee ay difaacanaysay.
Tababare Vahid Halilhodzic ayaa codka kalsoonida la siiyay, guushii 2-0ka ahayd ee ay ka gaadheen Australia waxay arrintaasi u xaqiijisay u soo bixitaanka Koobka Adduunka, waxayna sii xoojisay mustaqbalkiisa shaqada.
Japan labo jeer ayay gaadheen wareegga labaad ee Koobka Adduunka, waxaana ka mid ahaa midkii 2002dii, markaas oo ay koobka isla marti galiyeen dalka Kuuriyada Koonfureed.
Ciyaaryahan muhiim ah: Honda, Kagawa iyo Shinji Okazaki oo afka hore uga ciyaara Leicester ayaa dabcan muhiim u ah kooxda. Laakiin ciyaaryahanka buugaagta Arsenal ku qoran ayay u badan tahay in uu hogaamin doono xulka xagaaga soo socda.
Takuma Asano ayaa saddex gool u dhaliyay dalkiisa, naadiga Stuttgart ee ka dhisan dalka Jermalkana wuxuu xilli ciyaareedkii hore ka caawiyay in ay u soo gudubto koobka Bundesliga.
Ciyaaryahankan 22 jirka aha ayaa kooxdan kula jooga amaah, isaga oo ka tirsan naadiga Arsenal.
Tababaraha Arsenal, Arsene Wenger wuxuu Takuma ku tilmaamay mid hibo u leh ciyaaraha oo mustaqbal leh.
Ciyaaryahannada Horyaalka Ingiriiska ka ciyaara: Maya Yoshida (Southampton), Shinji Okazaki (Leicester City), Takuma Asano (kooxda Stuttgart ayuu u ciyaaraa, laakiin Arsenal ayuu ammaah kaga maqan yahay).
Vahid Halilhodzic oo reer Bosnia ah ayaa horey u xaqiijiyay in uu u qalmo masraxa koobka Adduunka, ka dib markii uu dalka Algeria gaadhsiiyay markii u horraysay wareegga kala baxa.
Tababarahan wuxuu horay u soo layliyay Paris St-Germain, Dinamo Zagreb iyo dalka Ivory Coast.
Nasser Al Shamrani ayaa 19 gool u dhaliyay Sacuudi Carabiya isaga oo u saftay 77 kulan
Guushii kali ahayd ee Sacuudi Carabiya ay ka gaadhay Koobka Adduunka wuxuu ahaa midkii 1994-tii, markaas oo ay labo ciyaarood guul ka soo hoyeen, gaadheenna wareegga labaad, guushii labaad ee ay gaadheen waxay ahayd middii ay Belgium 1-0 kaga badisay iyadoo uu gool aad u qurux badan u dhaliyay Saeed Al Owairan.
Ciyaaryahankii ugu wanaagsanaa Koobkii Aasiya ee 2014kii ayaa mararka qaar noqda mid kacsan, siddeed ciyaarood ayaana mar la ganaaxay ka dib markii uu candhuuf ku tufay Matthew Spiranovic oo u ciyaara Western Sydney Wanderers ka dib markii naadigiisa Al Hilal laga qaaday Koobka Horyaalada Aasiya ee 2014kii.
Ma jiro ciyaartoy Sacuudiga ka soo jeeda oo ka ciyaara horyaalka Ingiriiska ee Premier League.
Yaa tababara? Bert van Marwijk oo reer Netherlands ayaa dalkiisa gaadhsiiyay ciyaartii kama dambaysta ahayd ee Koobkii Adduunka ee 2010kii, naadiya uu soo tababarayna waxaa ka mid ahaa Borussia Dortmund, Feyenoord iyo Hamburg.
Real Madrid Oo Ku Tumatay Granada – Rikoodhkii Barcelonana Jebisay